Toriteny audio - Lalamasaka Hatry ny Ela
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 12 juillet 2020 · Last modified 2 février 2021
Amin’izao andro sarotra andalovantsika izao, izay fotoana tsy maintsy ianteherantsika amin’ny vavaka dia manasa anao hihaino ity torinteny ity. Tsy mbola nahazo ianao satria tsy mbola nivavaka, na efa lasa « kamo » mivavaka, na mivavaka tsy amin’ny hafanam-po sy fitarainana. Andriamanitra anefa matoa manentana antsika ao amin’ny Teniny mba hivavaka, dia satria efa sitrany ary efa vonona ny hamaly vavaka Izy...
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 25 juin 2020 · Last modified 2 février 2021
Aoka hanetry tena Sis Daoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano
Tandremo ny teny foana atao amin’ny hafa. Fehezo ny lelanao. Aoka halemy fanahy ary samy hanao ny namany ho ambony noho ny tenany, hilaza ny zavatra mampandroso. Dieny mbola kely ny ankizy dia ampianaro fa Andriamanitra dia tia ny olona rehetra.
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 20 juin 2020 · Last modified 15 juin 2020
Ahoana no hahavoavonjy BroDaoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 15 juin 2020 · Last modified 25 avril 2021
Fanamasinana BroDaoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano
Mialohan’ny hahatongavan’ny Fifohazana dia tsy maintsy misy ny Fanamasinan’Andriamanitra. Ny Fifohazam-panahy dia tsy tongatonga amin’izao fa tsy maintsy mivavaka isika mba hisintonana izany avy any ambony hidina ety an-tany. Andriamanitra tsy miara-miasa amin’ny vahoaka izay tsy manolon-tena tanteraka, fa miasa Izy raha isika manao ny anjarantsika.
Eo am-pihainoana ny torinteny dia aza adino ny manindry ny bouton Like.
Mark of the Beast, Bro Daoud, Jesosy Mamonjy Ankorondrano « Ao anatin’ny vanim-potoan’ny andro farany isika izao. Hisy fiovana tampoka ao anatin’ny fotoana fohy eto amin’izao tontolo izao. Raha hiteny aho hoe tokony hivavaka ianao, dia anio izay fotoana izay fa tsy tokony hangatak’andro ». Fr Daoud
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. — 1 Corinthiens 10:13
Total visitors : 8,762
Total page views: 13,971